अमिताभ र जयाको बलिउड चलचित्र ‘जंजिर’ रिलिजको ४४ बर्ष , यी ९ स्टार छैनन् जीवित – Nepali Entertainment Site
प्रकाश मेहेराको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘जंजिर’ रिलिज भएको ४४ बर्ष पूरा भएको छ। अमिताभ बच्चन र जया बच्चन स्टारर चलचित्र सन् १९७३ मा रिलिज भएको थियो। चलचित्र सुपरहिट बनेको थियो र बलिउडमा अमिताभ बच्चन युग सुरु भएको थियो।
चलचित्रले ४४ बर्ष पार गर्दै रहदा चलचित्रका धेरै स्टार कलाकारको भने निधन भैसकेको छ। आज हामी तीनै कलाकारको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ।
सेठ धारम दयाल तेजाको भूमिकामा अजित यो चलचित्रमा देखिएका थिए। यो रोल चलचित्रको प्रमुख भिलेनको रोल रहेको थियो. हिरोको रुपमा बलिउड प्रवेश गरेका उनलाई यो भिलेनको क्यारेक्टरले अर्को उचाईमा पुर्याएको थियो। उनको सन् १९९८ मा ७६ बर्षको उमेरमा निधन भएको थियो।
प्राणले चलचित्रमा इनिस्पेक्टर विजय खन्नाको रोल निर्वाह गरेका थिए। उनि अमिताभ बच्चनको साथीको भूमिकामा देखिएका थिए। उनको लुक्स र डाइलग डेलिभरी निकै रुचाईएको थियो। यो चलचित्रको पश्चात यी दुई १४ चलचित्रमा साथ देखिएका थिए। उनको २०१३ मा निधन भएको थियो।
आफ्नो समयको चर्चित चरित्र अभिनेताको रुपमा चिनिएका ओमप्रकाशले जंजिरमा ‘डी सिल्वा’ को भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पुलिसलाई गोप्य जानकारी दिने उनको शैली धेरैले मन पराएका थिए। उनको सन् १९९८ मा निधन भएको थियो।
पर्दामा धेरैजसो पुलिसको भूमिका निर्वाह गर्ने इफ्तेखरले ‘जंजिर’ मा पुलिश कमिश्वर सिंहको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। चचलचित्रमा उनको भूमिका निकै मन पराईएको थियो। ४०० बढी चलचित्रमा काम गरेका उनको १९९५ मा निधन भएको थियो।
५. केस्टे मुखर्जी
पर्दामा जड्याहको भूमिका निर्वाह गर्न माहिर मानिएका केस्टे जंजिरमा ‘गुंगको भूमिकामा देखिएका थिए। यहि रोलको कारण अमिताभ बच्चनलाई घुसको झुटो आरोप लागेको थियो. उनको सन् १९८५ मा निधन भएको थियो।
६. गोगा कपुर
जंजिर चलचित्रमा ‘गोगा’ को भूमिका निर्वाह गरेका गोगा कपुरको सन् २०११ मा निधन भएको थियो। उनको चरित्र निकै नोटिशेबल रहेको थियो।
७. मैक मोहन
उनले चलचित्रमा सेठ धरम दयाल तेजा को सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनको २०१० मा निधन भएको थियो।
८. सत्येन कपुर
जंजिरमा पुलिस इनिस्पेक्टरको भूमिका निर्वाह गरेका उनको २००७ मा निधन भएको थियो। उनले धेरै चलचित्रमा पुलिस इनिस्पेक्टरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
९. गुलशन बावर
गुल्सहं कुमार मेहेता उफ्र गुलशन बावरको २००९ मा निधन भएको थियो। यो चलचित्रमा उनले स्ट्रिट सिंगरको भूमिकामा देखिएका थिए।
चर्चामा विक्की र कट्रिनाको मित्रता, देखिदैछन् चलचित्रमा एकसाथ्
बलिउडमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका अभिनेता हुन्, विक्की कौशल।...
विवाह लगतै निक-प्रियंका डिभोर्स तयारीमा?, शेयर गरिन् यस्तो तस्विर
बलिउडमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको विवाह थियो अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र...
सत्यघटनामा अक्षयको ‘केसरी’, बन्यो धमाकेदार ट्रेलर
१९८७ मा सारागढीको लडाइँमा आधारित चलचित्र 'केसरी' को एक्सनले भरपुर...
सुपरहिट बन्यो विक्किको ‘उरी’ कमायो २ सय करोड
भारतीय बक्स अफिसमा विक्की कौसल स्टारर चलचित्र उरी: द सर्जिकल...
दमदार डाइलगको साथमा सलमानको ‘भारत’ टिजर
बलिउड अभिनेता सलमान खान अभिनित नयाँ चलचित्र 'भारत' को टिजर...
रणवीर र आलियाको ‘गल्ली व्वाई’ ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
बलिउडमा पछिल्लो समय अभिनेता रणवीर सिंहको निकै राम्रो क्रेज रहेको...